I-china Aluminium Alloy Toolbox abakhiqizi nabaphakeli | YSXF
I-MAXXHAUL 50218 Aluminium A-Uzimele Trailer Ulimi Ibhokisi
Ibhokisi lethu lolimi lweMaxxHaul Box lenzelwe ukukhweza kumakharavila ngozimele we-A-Tongue ukuhlinzeka ngesitoreji esithe xaxa samathuluzi akho, amagiya amatende, amaketanga okuphepha, amabhande, izembozo zemoto, imishini yangaphandle, izintambo, izesekeli ze-hitch, izintambo, amasondo okhiye nokunye okuningi . Ungalokothi ukhohlwe ithuluzi noma igiya lapho ulidinga!
- Yenziwe ngento eqinile ye-aluminium ehlala isikhathi eside futhi emelana nokugqwala ngokwakhiwa kwe-seam okushiselwe ngokuphelele nokuqina kwe-powder coat
- Iphethini lepuleti yedayimane linikeza amandla angeziwe nosizo kugcina ukwakheka kwalo ukuqina okungeziwe
- Ifaka umucu wegesi ukusiza ekuvuleni isivalo, ubambe isivalo endaweni nokuvala okuthambile.
- Ibhokisi likala u-29 "long x 18" ubude no-17 "ububanzi no-15" ngaphambili omude.
- Isivalo sokukhiya ngezikhiye ezi-2 kanye nesibambiso esikhishwe kahle. I-hinged eboshiwe ifakiwe ukuze isivalo sikwazi ukuvulwa ngokuphelele noma ngabe sikhonjiswe ngqo kwi-trailer
● Ibhokisi lamathuluzi le-aluminium elinamandla amakhulu
Ukubukeka kwekhwalithi ephezulu nokuhlala isikhathi eside, ukunakekelwa okuncane
Izinto ezilula ze-aluminium zinciphisa ukuzuza kwesisindo koogandaganda, ama-trailer, noma amaloli.
● Faka uphawu lwendandatho
Kungavikela inhlanzeko yangaphakathi futhi kuvimbele ukungena kwemvula nezinye izinto zangaphandle.
● Kungenziwa ngobukhulu obuhlukahlukene, imibala nezitayela
Umbala we-aluminium ohlanzekile futhi okhanyayo, noma yimuphi usayizi ungenziwa ngezifiso, nokwelashwa kwendawo, okwenziwe ngemibala ehlukahlukene njengombala omnyama, ompunga, isiliva nomhlophe.
Kungenziwa ngezimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo ukuhlangabezana nezinye izidingo ezahlukahlukene.
Langaphambilini Turck Amathuluzi
Olandelayo: I-Pickup Toolbox
I-LIGHTWEIGHT YOKUKHULA OKULULA NOKUTHWALA - Leli bhokisi lamathuluzi lenzelwe ngokwakhiwa okuqinile kepha okulula ukukhweza ngaphambili kwezitayela ze-A-Frame. Kulula ukuhlangana, kuhle ukuthwala ususe kwenye indawo uye kwenye uma kunesidingo. Isixazululo esihle sokugcina amathuluzi akho noma izinto egalaji lakho futhi ungeza isikhala esithe xaxa sokugcina ku-trailer yakho ebiyelwe. ✅ IDIYIMU EQHUBEKAYO YOKWENZA IDAYIMANE - Yakhiwe nge-aluminium emangelengele enezingwengwezi ezifakwe ngokuphelele, ukuze isetshenziswe kabi. Ithuluzi lokugcina ...